abasebenzisi be-Windows XP ebathenga nge $100 off Windows 8 amadivaysi - Izindaba Rule
abasebenzisi be-Windows XP ebathenga nge $100 off Windows 8 amadivaysi
Esikhathini sawo sokuphila NDABA LATEST yenza ngokuphelelwa yithemba azame ukukukhuthaza abasebenzisi XP ukuze uthuthukise imishini newer, Microsoft Unikela amakhasimende $100 off Windows ezithile 8 amadivaysi uma bethule computer abo XP esitolo.
I deal ugijima kuze 15 June, futhi litholakala Retailers phesheya US, Canada kanye Puerto Rico. “Nikelani kusebenza amakhasimende abenza ukuthenga online(s) nedivaysi abafanelekile Windows XP, noma ikhasimende ukwethula idivayisi abafanelekile Windows XP ngesikhathi sokuthenga(s) e-esitolo kuphela,” the Redmond ngokuqinile uyachaza.
Nakuba Microsoft okukhulunyiwe ukutholakala online, kungacacile ukuthi ungakwazi ukubonisa ukuthi umshini Windows XP phezu web ngaphandle kokuthatha ube esitolo.
The $100 Isaphulelo itholakala kuphela ekumelaneni entsha ebiza okungenani $599, futhi kuhlanganisa amaphilisi Ebusweni lokususa Surface 2. Microsoft waqokomisa HP Umona Touchsmart 15 zokuthinta isikrini laptop kanye Lenovo ThinkPad S1 Yoga zokuthinta isikrini laptop / tablet hybrid njengoba ezimbili amadivaysi bafaneleke deal.
Microsoft Kusobala siqiniseka ngamandla leli dili yini zikuqinisekisa XP die-hards lapho bonke abanye zehlulekile, njengoba engiyalela ukuthi amakhasimende kulinganiselwe kudivayisi ngamunye.
Microsoft isizophela zonke ukwesekwa zaso oneminyaka engu-12 ubudala yokusebenza kusuka 8 April. I eqinile uye kakade waxwayisa sendlela XP bengalondekile ufaniswa newer Windows ezisekelweni, kanye nabalingani like HP baqala imikhankaso ukuzama futhi ukhuthaze amabhizinisi ukuze uthuthukise.
Naphezu kwale mizamo, XP namanje kabanzi esetshenziswa yonkana izinhlangano kanye nabantu abanentshisekelo, futhi izohlala ngokucacile in post ukusetshenziswa 8 April. m
Lesi sihloko, abasebenzisi be-Windows XP ebathenga nge $100 off Windows 8 amadivaysi, is yedlanzana kusukela obuzayo futhi posted lapha nge imvume.
20672	0 Canada, obuzayo, Microsoft, Microsoft Surface, Microsoft Windows, Puerto Rico, Windows 8, Windows XP
← MH370 search emuva ku action kokuqala kwezomthetho iqala US amanani kawoyela basukume on kokuqina supply at hub key →